Shiinaha NMS2001-I Warshad Unit Control iyo alaab-qeybiyeyaal | Anbesec
Nooca Baaraha: Qalabka kuleylka toosan oo leh heerkul alaar go'an
Danab Operating: DC24V
Xaddiga Danab La Ogolyahay: DC 20V-DC 28V
Dib udajinta Qaylo-dhaanta: Dib u dejinta goynta
1. Bixinta korantada: Tilmaamaha cagaarka ayaa ifaaya (inta jeer ee ku dhow 1Hz)
2. Hawlgal Caadi ah: Tilmaamaha Cagaaran oo si joogto ah u shidan.
3. Digniinta Dabka Heerkulka Go'an: Tilmaame cas oo nalalka isdaba jooga ah
4. Cillad: Tilmaame jaalle ah ayaa si joogto ah u shidan
1. Heerkulka: - 10C - + 50C
2. Uumi qaraabo ah ≤95%, uumag ma laha
3. Fasalka Difaaca Shell: IP66
NMS2001-I ayaa la codsadaa si loo ogaado isbeddelka kuleylka dareeraha heerkulka, oo aan kala xaajoodo guddiga xakamaynta alaarmiga dabka.
NMS2001-Waan kormeeri karaa qalabka digniinta dabka, wareegga furan iyo wareegga gaaban ee aagga la ogaado si joogto ah oo isdaba joog ah, waxaanan tilmaami karaa dhammaan xogta ku jirta tusiyaha iftiinka. NMS2001-Waan dib-u-soo-ceshan doonaa ka dib marka aan korontada ka baxo iyo marka la shito, hawsheeda oo ah qufulka digniinta dabka awgeed. Si la mid ah, shaqada qalabka digniinta qaladku si otomaatig ah ayaa dib loogu soo celin karaa ka dib marka la nadiifiyo qaladka, NMS2001-I waxaa ku shaqeeya DC24V, markaa fadlan fiiro gaar ah u yeelo awoodda awoodda iyo fiilada korantada.
Qolof caag ah: Iska caabinta kiimikada, iska caabinta gabowga iyo iska caabinta naxdinta leh;
Test Tijaabinta jilitaanka digniinta dabka ama qaylo-dhaanta cilladda ayaa la sameyn karaa. Hawlgal saaxiibtinimo
Qaab muuqaal ah iyo tilmaamaha isku xidhka ee NMS2001-I:
Jaantuska 1 Qaab muuqaal ah ee NMS2001-I
Jadwalka 2 Iskuxidhka boosteejooyinka qaybta xakamaynta
DL1, - DL2: Sahayda korantada DC24V, isku xirnaansho la'aan
1, 2, 3, 4: oo leh fiilo dareen leh
COM1 NO1: digniin-bixiyaha / cilad / madadaalo, soo-gudbinta xiriiriyaha soo-saarista
EOL1: oo leh iska caabin rasmi ah 1
(si loo waafajiyo moduleka aqbashada, oo u dhiganta COM1 NO1)
COM2 NO2: dabka / cilad / madadaalo, soo gudbinta xiriir soosaar isku dhafan
EOL2: oo leh iska caabin rasmi ah 1
(si loo waafajiyo moduleka aqbashada, oo u dhiganta COM2 NO2)
(2) tilmaamaha isku xidhka ee dekedda dhamaadka siligga dareemaya
Isla samee laba geesood oo casaan ah, iyo sidaa darteed laba geesood oo cad, ka dibna samee xirxiraan biyo-caddeyn ah.
Isticmaalka iyo ku shaqeynta NMS2001-I
Xiriirinta iyo rakibida kadib, shid qeybta xakamaynta, ka dib iftiinka cagaarka iftiimaya ayaa bilig bilig ah. Raacday taas, baaruhu wuxuu tagi karaa xaalad caadi ah oo kormeer ah, iftiinka cagaarka iftiinka ayaa si joogto ah u socda. Hawlgalka iyo dejintaba waxaa lagu maamuli karaa shaashadda LCD iyo badhannada.
(1) Hawlgal iyo soo bandhigid
Muujinta socodka caadiga ah:
Soo bandhigida ka dib markaad riixdo "Fun":
Taabo "△" iyo "▽" si aad u doorato qalliinka, ka dibna riix "Ok" si aad u xaqiijiso meenuga, riix "C" si aad ugu soo celiso menu-kii hore.
Naqshadeynta menu-ka ee NMS2001-I waxaa lagu muujiyay sida soo socota:
Taabo "△" iyo "▽" si aad u bedesho xogta hadda ku jirta interface-ka sare "1.Alarm Temp", "2.Ambient Temp", "3.Using Longeng";
Ku dhaji "C" xogta hore, iyo "OK" xogta xigta ； riix "OK" dhamaadka xogta hadda si loo xaqiijiyo go'an iyo dib ugu noqo menu-kii hore, riix "C" bilowga hadda xogta si loo joojiyo go'an iyo dib ugu soo celinta menu-ka hore.
(1) Dejinta heerkulka digniinta dabka
Heerkulka digniinta dabka waxaa laga dhigi karaa 70 ℃ ilaa 140 ℃, habka ugu hooseeya ee heerkulka alaarmiga hore waa 10 ℃ ka hooseeya heerkulka digniinta dabka.
(2) Dejinta heer kulka hawada
Heerkulka ugu sarreeya ee qalabka wax lagu baaro waxaa laga dhigi karaa 25 ℃ ilaa 50 ℃, waxay ku caawin kartaa baare inuu la qabsado la qabsashada deegaanka shaqada.
(3) Set of dhererka shaqada
Dhererka fiilada dareenka ayaa laga dhigi karaa 50m ilaa 500m.
(4) Tijaabada dabka, baaritaanka cilladda
Isku xirnaanta nidaamka waxaa lagu tijaabin karaa liiska tijaabada dabka iyo cilladda cilladda dabka.
(5) kormeeraha AD
Liiskan waxaa loogu talagalay baaritaanka AD.
Heerkulka alaarmiga waa mid u dhigma heerkulka aagga iyo isticmaalka dherer ahaan aragti ahaan, deji heerkulka alaarmiga, heerkulka aagga iyo dhererka la adeegsanayo si maangal ah, si xasilloonida iyo kalsoonida loo horumarin karo.
Xiga: Qalabka Khadka Tooska ah ee NMS2001 Cable